Soo dejisan PhoneRescue 3.7 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: PhoneRescue
PhoneRescue – software ah oo loogu tala galay inuu ka soo kabsado xogta lumay ama si qalad ah la tirtiray ka iPhone, iPad iyo iPod taabashada. software wuxuu ka kooban yahay qaybaha ugu badan oo kala dhig qalabka iyo soo kabsadaan xogta laga badiyay in habka cayiman. kooxaha PhoneRescue xogta ah in la soo celin karin by qaybaha ku habboon, oo ay ku jiraan xogta shakhsiga ah, xogta warbaahinta iyo xog codsiyada. PhoneRescue u saamaxaaya in ay reserved goobta kaydinta iyo format ah files soo kabsaday. software waa ay awoodaan in ay soo celin xog ka hayaan iTunes iyo iCloud. PhoneRescue taageertaa hab dib u soo kabashada xog gaar ah oo ka-macruufka qalabka oo aan la soo jeestay karaa ka dib markii updates ugu, si joogto ah reboots ama aadan ka jawaabin cadaadis shaashadda.
Soo celinta xiriirada, SMS, photos, Bookmarks ee Safari iyo qoraalada
Soo celinta xogta ka hayaan iTunes iyo iCloud
Soo celinta xogta ka "phone bricked"
Soo celinta xogta gaar ah oo ku saabsan computer ama smartphone
Soo dejisan PhoneRescue
Faallo ku saabsan PhoneRescue
PhoneRescue Xirfadaha la xiriira